Tsy mahazo na inona na inona maimaim-poana ianao - Church of the World of God Switzerland
lahatsoratra > Miresaka momba ny fiainana > Tsy mahazo maimaim-poana ianao!
Ny ankamaroan'ny Kristiana dia tsy mino ny filazantsara - mihevitra fa ny famonjena dia ho azo raha tsy mahazo izany amin'ny alalan'ny finoana sy ny fiainana tonga lafatra ara-moraly. "Tsy mahazo na inona na inona amin'ny fiainana ianao." "Raha toa tsy dia marina tokoa ny marina, dia toa tsy marina izany." Ireo zavatra fanta-daza fantatrao amin'ny fiainana ireo dia naverimberina ao anaty tsirairay avy amin'ny alàlan'ny zavatra niainany manokana. Fa ny hafatra kristiana dia manohitra izany. Mihoatra noho ny tsara tarehy fotsiny ny filazantsara. Manolotra fanomezana izy io.
Izao no nilazan'i Thomas Torrence, teolojianina trinite: "Maty ho anao indrindra Jesosy Kristy satria mpanota ianao ary tsy mendrika azy tanteraka ary noho izany dia nataonao ho anao, eny fa na dia teo aloha sy tsy miankina amin'ny finoanao azy aza. Izy no namatotra anao ny fitiavany izay tsy hamelany anao mihitsy. na dia lavinao aza izy ary alefanao any amin'ny helo dia tsy hitsahatra ny fitiavany ". (The Mediation of Christ, Colorado Springs, CO: Helmers & Howard, 1992, 94).
Ny ankamaroantsika dia mbola mihevitra fa ny filazantsara dia ny fanatsarana ny fitondran-tenan’ny tena. Mino isika fa izay “mitsangana mahitsy sy mandeha amin’ny lala-mahitsy” ihany no tian’Andriamanitra. Kanefa, araka ny Baiboly, ny filazantsara dia tsy momba ny fanatsarana ny fitondran-tena. In 1. John 4,19 Voalaza ao fa ny filazantsara dia momba ny fitiavana - tsy hoe tia an’Andriamanitra isika, fa tia antsika. Fantatsika rehetra fa ny fitiavana dia tsy azo atao amin’ny alalan’ny hery na herisetra na amin’ny alalan’ny lalàna na fifanarahana. Tsy azo omena sy ekena an-tsitrapo ihany. Faly Andriamanitra manome azy ireo ary tiany horaisintsika ampahibemaso izany, mba hitoeran’i Kristy ao anatintsika sy hahatonga antsika hifankatia sy hifankatia.
In 1. Kor. 1,30 I Jesoa Kristy no fahamarinantsika, fahamasinantsika ary fanavotana antsika. Tsy afaka manolotra azy ny rariny isika. Matoky kosa isika fa izy no zava-drehetra amintsika izay tsy manan-kery. Satria izy no tia antsika voalohany, dia lasa afaka amin’ny fo feno fitiavan-tena isika mba hifankatia azy sy ny hafa.